पाल्पाका स्थानीय तहमा खोई :एक घर एक धारा ? – Nayadhar
पाल्पाका स्थानीय तहमा खोई :एक घर एक धारा ?
मंगलबार, आषाढ २४, २०७६ | ७:५१:४९ |
पाल्पा । सरकारले ‘एक घर एक धारा’ को अवधारणा अघि सारेको २ वर्ष बित्यो । यहाँ भने १० वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेका खानेपानीका योजना ६५ भन्दा बढी छन् । सरकारले पर्याप्त बजेट र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा त्यस्ता योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् ।
विगतमा प्रत्येक वर्ष करोडौंका केन्द्रीय योजना स्वीकृत भए । पछिल्लो वर्ष त्यस्ता योजनाको फाइल प्रदेशमा पुगेका छन् । केन्द्रका दर्जन बढी योजना अझै सम्पन्न हुन नसेकेर अलपत्र छन् । बाँकी सबै प्रदेशमा फाइल मात्र सरेका हुन् । कार्यालयमा पठाउने न्यून बजेटले त्यस्ता योजना समयमा पूरा हुन नसकेको डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले जनाएको छ ।
३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी त्यस्ता योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत दिने गर्थ्यो । अहिले प्रदेश सरकारमा त्यस्ता योजना पेस हुन थालेका छन् । काम सुरु भएका योजना वर्षौंसम्म पूरा नहुँदा स्थानीयले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ । कतिपय योजनाको पाइप किनेर राखिएको छ । केहीका टंकी निर्माण भएर पाइप किन्न नसक्ने अवस्था छ ।
बजेट अभावले खानेपानीका अधिकांश योजना लथालिंग छन् । उपभोक्ताबाट सम्पन्न गरिने योजनामा लागत रकमको ५ प्रतिशत पनि हरेक वर्ष नआउने समस्या छ । ‘क्रमागत योजना भनिन्छ तर समयमा बजेट आउँदैन,’ मेहल्ढाप, काफलबुटा खानेपानी योजनाका अध्यक्ष खिमप्रसाद गौतमले भने, ‘त्यसपछि समयमा काम गर्न सकिंदैन र अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, काफलबुटा र मेहल्ढापका लागि २ करोड बढीको लिफ्ट खानेपानी योजना सुरु भएको ५ वर्ष भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष बजेटकै अभाव हुने गर्छ ।
त्यसैले पनि तोकिएको मितिमा योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ३ सय बढी घर परिवारलाई खानेपानी व्यवस्था गर्न योजना सुरु भए पनि समयमा सकिएको छैन । योजना सम्पन्न हुन नसक्दा जनताले भने २/३ घन्टा टाढा पुगेर पिउने पानीको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको काफलबुटाकी उपभोक्ता सरस्वती खत्रीले बताइन् ।
नाम मात्रको उपभोक्ता समिति हुने योजनामा सबै बोलवाला भने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीको हुनेगर्छ । उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान गर्नेबाहेक अन्य कुनै भूमिका नहुने खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गौतमले बताए । सामान खरिद, निर्माणका काम उपभोक्ताले गर्न नपाउने र बजेटसमेत नहुँदा योजना अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी मातृकाप्रसाद गौतमले सम्पन्न हुनुपर्ने योजना जिल्लामा ६५ भन्दा बढी रहेको बताए ।
लामो समयदेखि बजेट न्यून भएकै कारण ती पूरा हुन नसकेको उनले बताए । ‘योजना इस्टिमेट गरेर स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट अत्यन्तै न्यून पठाउँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’ धेरै योजना सुरु गर्ने, हरेक वर्ष थप गर्दै जाने र विगतका अपुरा योजना पूरा नगर्दा समस्या बढै गएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका प्रायः सबै डाँडाबस्तीमा हिउँदको समयमा खानेपानीको समस्या हुन्छ ।
चालु योजनालाई पर्याप्त बजेट दिने हो भने समयमा पूरा हुन सक्थे । जनताले पनि घरदैलोमा पिउने पानीको सुविधा पाउने सूचना अधिकारी गौतमले बताए । जिल्लाका ८२ प्रतिशत जनताले पिउने पानी पाएको तथ्यांक डिभिजन खानेपानी कार्यालयले सार्वजनिक गरे पनि वर्षको ६ महिनाभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न योजनाका उपभोक्ताले समेत पाउँदैनन् ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत आउने बजेटको कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ । सबै योजना उपभोक्ता मार्फत गराइन्छ । ‘नाम उपभोक्ताको तर सबै काम ठेकेदारमार्फत हुने गर्छ,’ काफलबुटाकी उपभोक्ता मानकुमारी खत्रीले भनिन्, ‘उपभोक्तालाई साक्षी राखेर काम लगाउन खानेपानीकै प्राविधिकको जोड हुन्छ ।’ जिल्लामा जति पनि योजना सञ्चालनमा छन्, ती सबैमा ठेकेदार मार्फत काम भएका छन् । उपभोक्तालाई आवश्यक सामान सबै खानेपानी डिभिजन कार्यालयले टेन्डर मार्फत ल्याउने गर्छ । त्यसैले पनि योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् ।